समयमै अस्पताल पुगेकाले गम्भीर हृदयघातबाट जोगिएँ मदनकृष्ण श्रेष्ठ – Khabar Silo
काठमाडौं । हृदयघातले धेरैको जीवन खोसेको छ । यो घातक हृदयघात बारे सचेत रहन सके जीवन जोगाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ । उनी मुटुको उपचारपछि अहिले घरमा आराम गरिरहेका छन् । छातीको समस्या लिएर बिहिबार ग्राण्डी अस्पताल पुग्दा उनको मुटुको दुई भल्वमा ब्लकेज देखिएको थियो ।
दुई दिन अस्पताल बसेका श्रेष्ठको एन्जियोप्लास्टी प्रविधिबाट बिहीबार सफल उपचार गरिएको हो । अहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आएको श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘बिहान मर्निङ वाक गर्ने क्रममा छाती दुखेको महसुस भयो । श्रीमतीको समयमा उपचार हुन नसक्दाको पछुताउ सम्झेर म ढिलाई नगरी अस्पताल गएँ,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा ९९ प्रतिशत र अर्कोमा ९५ प्रतिशत ब्लकेज भइसकेको रहेछ ।’
अस्पताल पुग्न अलिकति ढिला गरेको भए हृदयघात भएर जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने डाक्टरहरुले उनलाई बताएका थिए । ‘हृदयघात भए पनि उपचार त हुन्थ्यो होला, तर मुटु कमजोर हुने थियो । अहिले उपचारपछि मुटु पहिलेभन्दा पनि बलियो भयो,’ श्रेष्ठले भने ।
ग्राण्डी अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममुर्ति अनिलले श्रेष्ठको उपचार गरेका थिए । उनलाई दुई हप्ताजति आराम गर्न भनिएको छ । श्रेष्ठ अहिले परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् । आफू सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको उनले बताए । श्रेष्ठकी पत्नी यसोदाको क्यान्सरका कारण ०७४ सालमा मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौं – सामान्यतयाः मानिसहरु विहान उठ्ने वित्तिकै कफि वा चियाबाट दिनको सुरुवात गर्छन । एक त ढिला उठ्ने त्यसमाथी खाली पेटमा नै चिया वा कफिको सेवन बिष सरह हुन सक्छ । ढिलो उठाई, कसरतरहित जीवन र अमिल्दो खानपान आयु घटाउने कारण पनि सक्छ । यो बेला तपाईले आफ्नो जीवन शैलीलाई बदल्न सके असामान्य फाइदा हासिल […]
के तपाई राति अबेर खाना खाने गर्नु हुन्छ ? स्वास्थ्यका लागि बन्न सक्छन यी ५ खतरा !
सही समयमा खाना शरीरका लागि जति फाइदाजनक हुन्छ, त्यति नै हानिकारक छ– गलत समयमा खाना खानु। जस्तोः राति अबेर खाना खाँदा विभिन्न रोगको खतरा बढ्छ। एक अनुसन्धानअनुसार रातिको खाना सुत्नुभन्दा ३ घण्टा अगाडि तथा खाजा खाएको ९० मिनेट पहिले खानुपर्छ। अनि मात्रा खाना राम्रोसँग पच्न पाउँछ।खाना विशषेज्ञ डा. शिवानी चतुर्वेदीले राति अबेर खाना खाँदा हुने […]
के तपाईं शरीरमा यस्ता ‘स्कीन ट्याग’ आएर चिन्तित हुनुहुन्छ ?
Posted on March 2, 2021 March 3, 2021 Author khabar silo
मान्छेको शरीरमा स-साना डल्ला जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ । कसैकोमा एउटा मात्र होला भने कसैकोमा सयवटा डल्ला होलान् । यी डल्ला हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् तर यीनले खासै हानि गर्दैनन् । सौन्दर्यलाई भने यिनीहरूले बिगार्छन् । सौभाग्यवश, यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ । चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट […]
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन हेर्नुहोस :०७६ कार्तिक १२ गते मंगलबार ई. स. २०१९ अक्टोबर २९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य